सरकार कसरी चल्छ त अब ? - EKalopati
सरकार कसरी चल्छ त अब ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विघटनपछि नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छापिएको छ, आदेशमा पछिल्लो समयमा जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र उनकै नेतृत्वमा राष्ट्रपतिबाट उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा भएको थप नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ ।
Previous articleसर्वोच्चको लात पाएका महन्थ अब के गर्लान् ?
Next articleमहन्थ पक्षको सांसदको बैठक बस्दै